Izinto Zokumaketha - Print Peppermint
Dala ukuhlangana komkhiqizo wakho kuzo zonke izinhlobo zemikhiqizo yokuphrinta efana namaflaya, izitikha, izimvilophu, izibhengezo, nokuningi.
Ikhaya / Izinto Zokuthengisa
Izihloko Ezithokozisayo Ezihlobene Nezinto Zokumaketha
Udinga ugqozi oluthile? Bheka ibhulogi yethu yokuklama lapho sidingida zonke izinhlobo zezihloko kusukela kokushiwo ukuba usomabhizinisi kuya kumathrendi emiklamo emisha nejabulisayo emhlabeni wokuphrinta.
Thola Ugqozi Lwakho >
Amathiphu angu-10 Wokuklama Amaphepha Okuyisa Uphawu Lwakho Kuzinga Elilandelayo
Kuwo wonke ama-hype edijithali, imidiya yokuphrinta ayikalahlekelwa ubuhle bayo. Iphepha yilapho imibono ivela khona futhi indaba yomkhiqizo wakho ikhulunywe. Usashintshanisa amakhadi ebhizinisi uma uhlangana nomuntu omusha, akunjalo? Futhi, akukho okuhlula i-vibe yokufunda umagazini onekhofi eceleni kwakho. Amaphephandaba aseyisiqalo ... Funda kabanzi
Ukukhetha Uhlobo Oluhle Kakhulu Lephepha Lokuphrinta
Uma umsebenzi wakho uhilela ukuphrinta nganoma iyiphi indlela, kukuthakazelisa kakhulu ukwazi uhlobo lwephepha elifanele. Noma uqhamuke nomklamo omuhle, kepha awazi ukuthi umsebenzi omuhle wokuphrinta uhlanganisani, kunethuba elikhulu lokuthi ukusebenza kwakho kanzima kungahle kwehle. Lokhu kuzwakala kunokhahlo, kodwa… Funda kabanzi
Amaphutha ayi-10 Abaqambi Bokumaketha Abaphrintiwe Nokuthi Ungawabhekisisa Kanjani
Njengoba umhlaba wokumaketha usuthumele ku-inthanethi, abantu abaningi sebenesiqiniseko sokuthi ukumaketha okuphrintiwe akuseyona indlela esebenzayo yokuheha amakhasimende. Lokhu kungabonakala kuyiqiniso ngaphezulu, kepha ngokumba ujule kancane, uzothola ukuthi ukumaketha kokuphrinta kuhamba kancane kancane. Esinye sezizathu ezinkulu… Funda kabanzi
Benginamakhadi ngokwezifiso enzelwe iklayenti lami futhi ungu-TH...
RILLED ngomphumela. Ngaphambi kokutholwa Print Peppermint Ngabhekana nokukhungatheka okuningi nezinye izinkampani zokuphrinta futhi akekho owayenombala we-foil ofanele. Print Peppermint wahamba ngaphezu kwalokho - ngisho nokusheshisa izinto ukuze iklayenti lami libe namakhadi alo ngaphambi kohambo lwalo lwase-Europe. Ngiyabonga kakhulu!
1 usuku edlule
Ngeke ngiphrinte kwenye indawo!
Yonke iphrojekthi engiyiphrinte nge-Print Peppe...
i-rmint ibe yinhle.
Ngihlale ngihlabeke umxhwele ngekhwalithi! 10/10 r...
isevisi yamakhasimende ibiqinile
Ukwenziwa komklamo engangicabanga ngawo kwafika ...
impilo sibonga Print Peppermint! Yonke le nqubo yayilula kakhulu, futhi ithimba lalihlale lixhumana nami uma nginemibuzo noma ukukhathazeka. Siyabonga ngesevisi yamakhasimende emangalisayo! Ngikhathazeke kakhulu ngokuqedwa kwe-holographic
amalebula aphelele ayawathanda!
Ngiyawathanda wonke amasampuli. Kwangibonisa i-va enkulu...
i-riety yezinketho zemibala ehlukene.
ukuphrinta kwe-letterpress ehlukahlukene.
i-riety yezitayela ezahlukene zokuphrinta Peppermint angakwenza.
Iphakethe elihle lamasampula :)
I-oda beligcwele futhi libukeka lilihle !!
Izinyanga 2 edlule
Imibuzo Evame Ukubuzwa - Izinto Zokumaketha
Ngiyenza kanjani iflaya yebhizinisi?
I-Photoshop akuyona eyawo wonke umuntu. Nakuba kuyithuluzi elinamandla kakhulu lokuklama, akuwona wonke umuntu onesikhathi sokufunda ukuthi lisebenza kanjani. Ungakhathazeki. Ungathola amathuluzi aku-inthanethi afana neCanva ukuze ungene esikhundleni sezinhlelo zokuklama eziqinile njenge-Photoshop. Abaqalayo nabachwepheshe ngokufanayo bangazuza kulawa mathuluzi. Ingakusiza ukuthi udale… Funda kabanzi
Ungayakha kanjani ikhadi leposi leposi eliqondile?
Indlela Yokuklama Ikhadi Leposi Eliqondile: Umhlahlandlela Wokugcina Kusukela eminyakeni eyishumi edlule noma ngaphezulu ukumaketha kwekhadi lokuposa kuye kwaba nephutha. Amabhizinisi anamuhla atshala ingxenye enkulu yezimali zawo zokukhangisa ekukhangiseni nge-imeyili, ukumaketha kwemiyalezo, nezinye izikimu zezinsuku zanamuhla. Ngaphandle kwalezi zinguquko kumasu okuthengisa, i-imeyili engokoqobo, leyo abathengi abayitholayo mathupha ... Funda kabanzi
Ngabe i-stationery design ifaka ini?
Ihlanganisani i-Stationery Design? Ukumelwa okungcolile, okungafaneleki nokungahlangani komkhiqizo wakho kungasho inhlekelele. Ngakho-ke kufanele ube nezinto zokubhala eziklanywe ngokwezifiso ezihambisana nesithombe somkhiqizo wakho. Kungani I-Stationery Design isasebenza? Cabanga ngezikhangiso njengokuvela kwakho kokuqala okubalulekile. Uma igama lakho seliphumile, ezindleleni eziku-inthanethi ezifana nezokuhlalisana... Funda kabanzi
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuklama incwajana engathi shu?
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuklama incwajana ephindwe kathathu? Incwajana ephindwe kathathu iyiflaya enamaphaneli angu-3 eyakhiwe ngokugoqa ishidi lephepha elingu-8 1/2 x 11. Amabhizinisi amancane asekhaya ngokuvamile ayisebenzisa njengenxusa lokumaketha ngenxa yokuthi ingathunyelwa kalula ngayo. Abaqambi abaningi banombono oyiphutha wokuthi ... Funda kabanzi
Ungaklama kanjani iflaya leposi eliqondile eliphumelelayo?
Uyiklama Kanjani Ipheshana Eliqondile Lemeyili Eqondile – Umhlahlandlela Wokugcina Wokumaketha we-imeyili awakalahlekelwa ukukhanga kwawo. Isenomlingo wokuthakatha amakhasimende ngezinombolo. Ngeshwa, akuwona wonke ama-imeyili afafazwe ngomlingo wobuhle nolimi. Ezinye zishoda ngendlela esabekayo. Imeyili eqondile eyenza umaki futhi ithole… Funda kabanzi
Kuyini Designery Design?
Iyini i-Stationery Design? Amathiphu, Amasu, kanye Nokukhuthaza Kwama-Dummies Naphezu kokukhuphuka kwe-meteoric kwamathuluzi okuthengisa edijithali, izinto zokubhala azikalahlekelwa isiqu sazo sama-Victorian. Njengombuso waseBrithani, isenamandla okudedela amandla amakhulu. Izincwadi zokubhala yigama elibanzi elihlanganisa amakhadi ebhizinisi, izimvilophu, izincwadi, amalebula, amakhadi okuposa, amaflaya, izincwajana, nokunye okufanayo ... Funda kabanzi